Okporo ụzọ St Brigid - IntoKildare
Stzọ St Brigid na -eso nzọụkwụ nke otu ndị nsọ anyị kacha hụ n'anya site na obodo Kildare ebe ndị na -aga ije nwere ike nyochaa ụzọ akụkọ ifo a iji chọpụta ihe nketa St Brigid.
Malite na Kildare Heritage Center na Market Square, ndị ọbịa nwere ike kirie ihe onyonyo onyonyo na St Brigid na njikọ ya na obodo tupu ịga n'ihu na Katidral St Brigid na St Brigid's Church nke Daniel O mepere. ?? Connell na 1833.
Isi nkwụsị na ụzọ ahụ bụ Solas Bhride Center ?? ebe ewulitere ebumnobi raara nye ihe nketa nke St Brigid. N'ebe a ndị ọbịa nwere ike inyocha akụkọ St. Brigid na ọrụ ya na Kildare. Solas Bhride na -eme ememme Feile Bhride (ememme Brigid) n'izu ọ bụla na afọ a, a ga -eme mmemme ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ.
Ebe ikpeazụ na njem ahụ bụ St Brigid's ochie na Tully Road, ebe ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ oge udo na ụlọ ọrụ Kildare nke ama ama nke ọma mmiri.
Maka maapụ na ozi ndị ọzọ, pịa ebe a.
Akụkọ banyere St Brigid
St Brigid hiwere ebe obibi ndị mọnk maka ma ndị nwoke ma ndị nwanyị na Kildare na 470AD site na ịrịọ Eze Leinster maka ala ụfọdụ. Na -enye St Brigid naanị ala nke uwe mwụda ya nwere ike ikpuchi, akụkọ mgbe ochie na -agwa ya na ọrụ ebube gbatịrị uwe ahụ iji kpuchie mbara ala Kildare dị larịị. Ụbọchị St Brigid bụ akara ụbọchị mbụ nke oge opupu ihe ubi na mpaghara ugwu nke Ndị Kraịst n'ụwa niile na -eme ya kemgbe ọtụtụ narị afọ.
Ndị ozi ala ọzọ nke Irish na ndị si mba ọzọ kwagara aha ya na mmụọ ya gburugburu ụwa. Taa, ndị njem ala nsọ na ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile na -abịa Kildare na -achọ ịga ije na nzọụkwụ Brigid.
Ihe nketa na akụkọ ihe mere eme, Outdoors, Na-eje ije & Hiking, Ụzọ ụkwụ, Ihe Nwere Ike Ime, Ochie Anyanwụ nke Ireland, Kildare
Ahịa Market, Kildare, Obodo Kildare, Ireland.